Tababaraha Kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel oo doonaya inuu la soo wareego xiddig ka tirsan Bayern Munich – Gool FM
(London) 06 Sebt 2021. Tababaraha Kooxda kubadda cagta Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa la soo warinayaa inuu doonayo inuu la soo wareego ciyaaryahan ka tirsan Naadiga Bayern Munich ee ka dhisan dalka Jarmalka.
Jariiradda The Express ayaa warinaysa in Tababare Thomas Tuchel uu doonay onuu soo qaato xiddiga garabka uga ciyaara Kooxda Bayern Munich ee Leroy Sane, kaasoo uu doonayo inuu dib ugu soo celiyo England.
Kooxaha Tottenham iyo Arsenal ayaa sidoo kale xiiseynayey inay la soo wareegaan xiddigii hore ee Kooxda Manchester City oo ay dib ugu soo celiyaan horyaalka Premier Leage, laakiin Blues ayuu dooran karaa, maxaa yeelay waxa ay ka ciyaarayaan Champions League, haddiiba uu soo laabanayo.
Chelsea ayaa laga yaabaa inay diyaar u tahay inay u soo bandhigto Bayern Munich, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech ama Christian Pulisic oo ay qayb kaga dhigto heshiis kasta oo ay ku helayaan Sane.
Samuel Umtiti oo ooyin la aamusin waayay mar uu la kulmay Guddoomiyaha Kooxda Barcelona ee Joan Laporta